Manana Antony Hatahorany Ny Amin’ny Asany Ilay Endrika Famantarana Ny Fanoherana Japoney · Global Voices teny Malagasy
Manana Antony Hatahorany Ny Amin'ny Asany Ilay Endrika Famantarana Ny Fanoherana Japoney
Voadika ny 04 Marsa 2016 17:59 GMT
Dikasary, havia miankavanana: Fanovàna sary famantarana (ho an'ilay antoko vaovao)? Aorian'ny fitambarana: Minshu-kun mety ho sorona. Inona no mety hiandry azy? “Tiako ho fantatra fotsiny!” Ahoana no hisorohany izany fanovàna izany?? Pikantsary tamin'ny fantsona ofisialy Youtube an'ny ANN.
Mety midika ho fiafaràn'i Minshu-kun ilay sosokevitra hanambatra antoko mpanohitra roa any Japana, Minshu-kun ilay endrika famantarana adaladalan'ny “Minshuto” (民主と), na ny Antoko Demokratikan'i Japana (DPJ), izay antoko mpanohitra lehibe indrindra ao amin'ny Fitondràna.
Ankoatra ny ahalalan'ny be sy ny maro azy ho endriky ny antoko mpanohitra lehibe indrindra ao Japana aza, lasa zatra ny nanana endrika hafahafa sy tsy manam-paharoa amin'ny Aterineto i Minshu-kun:
— 民主くん@民主党公認 (@minshu_kun) February 26, 2016
Mba nandehandeha fotsiny tamin'ny fiarakaretsaka !
Raha “tsy voafaritra” (性別不明, seibetsu fumei) na lahy na vavy i Minshu-kun, misy tovana kun (君), manandra-tena ho lehilahy ny ampahan'ny anarany. Minshu-kun. Mampiasa boku (僕) fanampin'anarana lehilahy ihany koa ilay endrika famantarana, .
Noforonina voalohany i Minshu-kun mba hifandraisana amin'ny tanora taorian'ilay fanapahankevitra ny taona 2009 mba hampidinana h 18 taona ny taona afaka mifidy ao Japana.
Hampiharina mandritra ireo fifidianana mandritra ny fahavaratra 2016 ilay fampidinana ny taonan'ny mpifidy, ary mandany ny ankamaroan'ny fotoanany mitsidika ireo sekoly i Minshu-kun, mankahery ireo tanora mba hifidy.
— 民主くん@民主党公認 (@minshu_kun) February 29, 2016
Ny 23 Martsa (Alarobia) hiseho aminà hetsika ho an'ireo vehivavy mpianatra amin'ny sekoly antenantenany sy ambony i Minshu-kun ~♪
Amin'izao midoladola miaraka amin'ny tanora, mampandihy valahana ary maneho Takeshita Dori any Harajuku aho!
Jereo eto ny andinindininy bebe kokoa!
Raha mijanona tsy malaza amin'ny salan-taona rehetra ao Japana ny DPJ, amin'ny lafiny hafa, raha jerena lavidavitra dia nahavita nahatratra ny fon'ireo sokajy tanora kosa i Minshu-kun.
Ohatra, Minshu-kun namerina nibitsika ny hoe:
— モヒモヒ大将@ワサラー団一軍 (@gnrjip) March 1, 2016
Tsy tiako ny DPJ fa tsyvatery hiteny aho hoe tsy tiako manokana i Minshu-kun.
Nahazo ilay endriny boribory avy amin'ny fango famantarana ny Antoko Demokratika ilay endrika famantarana, masoandro misandratra arahan'ny taratra alefany eo anaty ranomasina.
Io masoandro io, ny tena marina, mety apetraka amin'ny Antoko Demokratika sy Minshu-kun.
Amin'ity fahavaratra ity, hanao fifidianana i Japana ho an'ireo efitra roa ambany sy ambony amin'ilay Fitondràny tantanan'ny parliemanta roa.
Ny DPJ no nandrafitra ny governemantan'i Japana teo aloha talohan'ny nandrodanan'i Abe Shinzo sy ny Antoko Demokratika Malalaka azy teo amin'ny fahefana ny taona 2012.
Tao amin'ny mpanohitra, niatrika ady anatiny sy fanohanan'ny vahoaka zara raha nisy ilay antoko, ary mety hoe tratran'ny fanadinoana tanteraka amin'ireo fifidianana amin'ny fahavaratra 2016.
Fikasan'ny DPJ ny hitambatra amin'ny Isshin no To (維新の党, ilay Antokon'ny Fivoarana ao Japana), antoko faharoa lehibe indrindra avy amin'ny mpanohitra ao amin'ny Fitondrana ao Japana raha ny isan'ny toerana. Hiresaka tsara mikasika io fitambarana io ireo antoko roa ny 27 Martsa.
Raha toa ka tokony hoe trohan'ny DPJ fotsiny ilay kelikely kokoa Isshin no To, toa lasa mitovy amin'ny hoe antoko vaovao mihitsy ilay izy, miaraka amin'ny sary famantarana hivoaka mialoha ny fahavaratra.
Raha izany no miseho, misy atahorana ny amin'i Minshu-kun, amin'ilay sary famantarana matevin'ny DPJ azy, mety “hovaina” (????) na avela mihitsy, na tafàla tamin'ilay fanovàna lehibe ny endrika famantarana Japoney ny 2014 aza.
Efa tamin'ny Febroary no nomarihin'i RaMu,”VIPPER” ( mpilalao ny 2chan) ary mpanakanto mpiantsehatra izay fantatra amin'ireo “Vines” (lahatsary fohy) mampihomehy ataony, ankoatry ny zavatra hafa, ny mety hanjo an'i Minshu-kun.
— RaMu教祖【KissBeeZERO】 (@dpandaramu) February 26, 2016
Aty amin'ny efitra fiandrasann'ny hopitaly aho izao ary mipetraka tanteraka amin'ny tany … Mijery fahitalavitra (´ω` )/
…Esorina i Minshu-kun?
Namaly i Minshu-kun, mampiasa ilay fombany fananihaniany hafahafa:
Izaho, esorina? Tsy aiko mihitsy koa ny zavatra mitranga!
Ety an-dàlana mankany amin'ny hopitaly haka fanafody amin'izany aretina mahazo ahy izany aho. Tsy kisendrasendra izany, sahala amin'ny hoe efa anjara (samy ho ao amin'ny hopitaly ianao sy izaho amin'ny fotoana mitovy).
Toa eo amin'ny lafiny fiarovana ireo mpikambana sasany amin'ny DPJ mikasika ny fanapahankevitra hanesorina ilay endrika famantarana. Nibitsika izao i Kuroiwa Takahiro:
— 黒岩 たかひろ (@wEPb4v9hHFQb5yp) March 2, 2016
Androany, ao amin'ny foiben-toeran'ny antoko, namory ireo mpanao gazety mpanàla azy mivoaka isan-kerinandro izahay ary media vitsvitsy mpamoka vaovao. Na tokony mikasika ny fitambaran'ny DPJ sy Isshin no To aza no lohahevitry ny fianakalozana hevitra, nivadika haingana tamin'ny resaka mety hanesorana na tsia an'ilay endrika famantarana Minshu-kun ny resadresaka.
Te-hiteny ny hevitra nasosoko aho (ny 2009) hoe i Minshu-kun no lasa (endrika iraisana) ho an'ny sampana tanoran'ny DPJ.
Kanefa, toa hita ho isaina sisa ny andron'i Minshu-kun.
Taminà tafatafa vao haingana, nilaza i Okada Katsuya, mpitarika ny DPJ ankehitriny, fa mety halefa any amin'ny biraon'ny tsy manana asa i Minshu-kun.
Zavatra mazava be hoe hiova ny sary famantarana ilay antoko. Raha afaka “hovaina kely” i Minshu-kun dia ho afaka hamoaka ny famantarana vaovao, mahatsapa ihany aho fa tsy ho mora ny hanao izany.
Raha afaka miaina toy ny endrika famantarana tsy nahazo alàlana izy, mieritreritra aho fa hevitra tena tsara ny mitondra azy ao amin'ny Hello Work (Arabaina ny Asa) [tambajotran'ireo ivontoerana fitadiavana asa an'ny governemanta Japoney], mampiofana sy manova kely azy ary mampiditra azy amin'ny toerampiasàna vaovao.
3 ora izayMyanmar (Birmania)